भारतीय गुप्तचर प्रमुखले ओलीलाई भेटेपछि चुच्चे नक्शा फेरि गायव « Etajakhabar
काठमाण्डौं । हालै नेपालको नक्शामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर चर्चामा आएका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै आफ्नो दशैंको शुभकामना सन्देशमा देशको चुच्चे नक्शा गायव पारेका छन् । उनको शुभकामना सन्देशमा देशको पुरानै नक्शा समेटिएको छ ।
हालै भारतीय गुप्तचर संस्था (रअ) का प्रमुख नेपाल आएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका थिए । यो कुराको पुष्टी प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको सन्देशमा यस्तो भएपछि सामाजिक सञ्जालमा त्यसको ब्यापक विरोध भइरहेको छ । केही समय अघि भारतले नेपाली भूभागसहितको राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त नक्सालाई संविधान संशोधन गर्दै संघीय संसदले पास पनि गरिसकेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले नै नेपालको नयाँ नक्साको साटो पुरानो नक्सा प्रयोग गरेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको हो । उनको यो कदमप्रति प्रश्न उठाउनेमा पत्रकार, नेकपा बाहेकका राजनैतिक दलका नेता रहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा चलेको बहसमा अधिकांशले ओली आफ्नो अडानबाट पछि हटेको बताएका छन् ।
विदेश बाट आएकी श्रीमतीले मिठो मानेर खाना खाएका श्रीमानको भयो मृत्यु
यी ४ कुरालाई ध्यान दिएमा ८० प्रतिशत रोग नै लाग्दैन – डा. भगवान कोइराला (भिडियो)
काठमाडौंमा ३ दिनदेखि भोकै रहेका भाईको टाउकोको उपचार पनि हुने भो । थेरापी मेसिन किन्नका लागि शिशिर भण्डारी लागि परे (भिडियो हेर्नुस)
अक्सिजनसहित उपचार गर्नुपर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि अस्पतालहरु समस्यामा परेका छन् । उनीहरुले अक्सिजन
माधव पक्षका सांसदहरु सिंहदरवारमा, केहीबेरमा राजीनामा बुझाएर बाहिरिने तयारी
काठमाडौं – काठमाडौं । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि माधव नेपाल
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तिब्र रुपमा फैलिरहँदा संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढिरहँदा अस्पतालहरुसमेत
देवीस्थानबाट हराएका पुनको शव यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ देवीस्थानबाट हराएका एक युवाको १२ दिनपछि ओढारमा ढुङ्गाले अँठ्याएको अवस्थामा शव फेला
साबधान ! यस्तो लक्षण देखिएमा कोरोना हुन सक्छ, अस्पताल जान ढिलो गरे जान सक्छ ज्यान